ကြေးရှာ သုဿနျမွကေိစ်စ ယုဇနကုမ်ပဏီ နှငျ့ ဟူးကောငျးဒသေခံမြား အငွငျးပှား - Kachin News Group (KNG) ,
ကြေးရှာ သုဿနျမွကေိစ်စ ယုဇနကုမ်ပဏီ နှငျ့ ဟူးကောငျးဒသေခံမြား အငွငျးပှား
ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင့်ချိုင့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းတလျှောက် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ယုဇနကုမ္ပဏီမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သော ဒေသခံကချင်လူမျိုးများ၏ နယ်မြေတွင် ရွာသားများ ကိုယ်ပိုင် ‘သုဿန်မြေ’ အဖြစ် ဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထားခြင်းကို ကုမ္ပဏီဘက်မှ ဖျက်ဆီးခြင်းပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေသခံများ ဆိုပါသည်။
(၁၀)နှစ် ကျော်ခန့် ‘သုဿန်မြေ’ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် Ban Kawk (ဘန်ကောက်)၊ Awng Ra (အောင်ရာ)၊ San Pya (စံပြ)ကျေးရွာ (၃)ရွာသည် ယခုလဆန်းပိုင်းက “သုဿန်မြေ” စာပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို သွားရောက်စိုက်ထူခဲ့ရာ တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် ယုဇနကုမ္ပဏီ အမှုထမ်းများ ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပေးလိုက်ကြောင်း Awng Ra (အောင်ရာ)ကျေးရွာမှ Slg. La Awng (ဦးလအောင်)က ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ယခုလိုပြောသည်။
“အခုပြောတဲ့ ကျေးရွာ (၃)ရွာမှာ ‘သုဿန်မြေ’ မရှိတော့ ကျနော်တို့က ဒီကျေးရွာ (၃)ရွာမှာရှိတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သုဿန်မြေတောင်းဆိုဖို့ အစည်းဝေးတွေလည်း (၂)ခေါက်လောက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့မှာ တောင်းခံစာကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ယုဇနကုမ္ပဏီရုံးကို တင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ယူသွားတယ်။
နောက် သုဿန်မြေကို သူတို့နေရာချပေးမလား ဆိုပြီး စောင့်ဆိုင်းခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ချက်ချင်းနေရာ မချပေးဘူး။ အဲ့ကြောင့် ကျနော်တို့က ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဆိုင်းဘုတ်သွားထောင်ထားတော့ တစ်ပတ်လောက်ဘဲ ယုဇနကုမ္ပဏီက ဖျက်သိမ်းပေးလိုက်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ ကျေးရွာ (၃)ရွာပေါင်း အိမ်ခြေ ၆၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး မကြာခဏ လူသေဆုံးမှုဖြစ်လာချိန် Shahtu Zup (ရှဒူးဇွပ်) ကျေးရွာပိုင် သုဿန်မြေနေရာတွင်သာ အခကြေးငွေ ပေးကာ သွားရောက်မြုပ်နှံနေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။
ယခင်က Ban Kawk (ဘန်ကောက်)ကျေးရွာတွင် အများသုံး ဘုံသုဿန်မြေ ရှိခဲ့သော်လည်း ယုဇနကုမ္ပဏီ၏ စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြေနေရာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရကြောင်း Ban Kawk (ဘန်ကောက်)ကျေးရွာ၏ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးဖြစ်သည့် Slg. Chyauchyi Hkawn San ယခုလို ပြောဆိုပါသည်။
“ကျမတို့ Ban Kawk (ဘန်ကောက်)ကျေးရွာရဲ့ သုဿန်မြေနေရာကို ယုဇနကုမ္ပဏီက ၂၀၀၈ လောက်မှာ ဒေသခံတွေကို ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ အားလုံးဖျက်စီးပေးလိုက်တယ်။ အခုအဲ့နေရာမှာက စေတီဘုရားတည်ထားတယ်။ အဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာက စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ထားတယ်။ ယနေ့ထိ ဒေသခံတွေကို သုဿန်နယ်မြေ ပြန်သတ်မှတ်ပေးတာတွေ မရှိသေးဘူး” ဟု ပြောဆိုသည်။
ဒေသခံများ အမှတ်အသားစိုက်ထူထားသော သုဿန်မြေဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ယုဇနကုမ္ပဏီဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း သုဿန်မြေသတ်မှတ်ပေးရန် အတွက် တိကျသော တုန့်ပြန်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိခဲ့ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Slg. Naw Di (ဆလန် နော်ဒီး)ထံမှ သိရပါသည်။
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကြာ ဒေသခံများနှင့် ယုဇနကုမ္ပဏီသည် မြေယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်အငြင်းပွားမှုများနှင့် တရားစွဲဆိုမှုများ ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်နေပြီး အစိုးရ၏ ဖြေရှင်းပေးမှုလည်း မရှိကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုနေကြပါသည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း ဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာပိုင်စားကျက်မြေ နှင့် သုဿန် မြေအစရှိသည်တို့ကို အစိုးရခွင့်ပြုချက်မယူ၊ ယုဇနကုမ္ပဏီဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုမပြုဘဲ ကိုယ်ပိုင် သတ်မှတ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေသခံများမှ သိရပါသည်။
ကခငျြပွညျနယျ ဟူးကောငျ့ခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးတလြှောကျ ယခငျစဈအစိုးရလကျထကျ ရနျကုနျအခွစေိုကျ ယုဇနကုမ်ပဏီမှ သိမျးဆညျးခဲ့သော ဒသေခံကခငျြလူမြိုးမြား၏ နယျမွတှေငျ ရှာသားမြား ကိုယျပိုငျ ‘သုဿနျမွေ’ အဖွဈ ဆိုငျးဘုတျမြားစိုကျထားခွငျးကို ကုမ်ပဏီဘကျမှ ဖကျြဆီးခွငျးပွုလုပျနကွေောငျး ဒသေခံမြား ဆိုပါသညျ။
(၁၀)နှဈ ကြျောခနျ့ ‘သုဿနျမွေ’ ပြောကျဆုံးခဲ့သညျ့ Ban Kawk (ဘနျကောကျ)၊ Awng Ra (အောငျရာ)၊ San Pya (စံပွ)ကြေးရှာ (၃)ရှာသညျ ယခုလဆနျးပိုငျးက “သုဿနျမွေ” စာပါ ဆိုငျးဘုတျကို သှားရောကျစိုကျထူခဲ့ရာ တဈပတျခနျ့အကွာတှငျ ယုဇနကုမ်ပဏီ အမှုထမျးမြား ပွနျလညျ ဖကျြသိမျးပေးလိုကျကွောငျး Awng Ra (အောငျရာ)ကြေးရှာမှ Slg. La Awng (ဦးလအောငျ)က ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ယခုလိုပွောသညျ။
“အခုပွောတဲ့ ကြေးရှာ (၃)ရှာမှာ ‘သုဿနျမွေ’ မရှိတော့ ကနြျောတို့က ဒီကြေးရှာ (၃)ရှာမှာရှိတဲ့ ဘာသာပေါငျးစုံက တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး သုဿနျမွတေောငျးဆိုဖို့ အစညျးဝေးတှလေညျး (၂)ခေါကျလောကျ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့မှာ တောငျးခံစာကို အုပျခြုပျရေးမှူးက ယုဇနကုမ်ပဏီရုံးကို တငျပေးမယျဆိုပွီး ယူသှားတယျ။
နောကျ သုဿနျမွကေို သူတို့နရောခပြေးမလား ဆိုပွီး စောငျ့ဆိုငျးခဲ့သေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က ခကျြခငျြးနရော မခပြေးဘူး။ အဲ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့က ခကျြခငျြးအကောငျအထညျဖျောလိုကျတာဖွဈတယျ။ ဆိုငျးဘုတျသှားထောငျထားတော့ တဈပတျလောကျဘဲ ယုဇနကုမ်ပဏီက ဖကျြသိမျးပေးလိုကျတယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
လကျရှိ ကြေးရှာ (၃)ရှာပေါငျး အိမျခွေ ၆၀၀ ကြျောရှိနပွေီး မကွာခဏ လူသဆေုံးမှုဖွဈလာခြိနျ Shahtu Zup (ရှဒူးဇှပျ) ကြေးရှာပိုငျ သုဿနျမွနေရောတှငျသာ အခကွေးငှေ ပေးကာ သှားရောကျမွုပျနှံနရေကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှသိရပါသညျ။
ယခငျက Ban Kawk (ဘနျကောကျ)ကြေးရှာတှငျ အမြားသုံး ဘုံသုဿနျမွေ ရှိခဲ့သျောလညျး ယုဇနကုမ်ပဏီ၏ စိုကျပြိုးရေး စီမံကိနျးဝငျရောကျခဲ့ပွီးနောကျ မွနေရော ပြောကျဆုံးခဲ့ရကွောငျး Ban Kawk (ဘနျကောကျ)ကြေးရှာ၏ ရပျမိရပျဖတဈဦးဖွဈသညျ့ Slg. Chyauchyi Hkawn San ယခုလို ပွောဆိုပါသညျ။
“ကမြတို့ Ban Kawk (ဘနျကောကျ)ကြေးရှာရဲ့ သုဿနျမွနေရောကို ယုဇနကုမ်ပဏီက ၂၀၀၈ လောကျမှာ ဒသေခံတှကေို ဘာတဈခှနျးမှ မပွောဘဲ အားလုံးဖကျြစီးပေးလိုကျတယျ။ အခုအဲ့နရောမှာက စတေီဘုရားတညျထားတယျ။ အဲ့ဒီအနောကျဘကျမှာက စိုကျပြိုးရေးတှလေုပျထားတယျ။ ယနထေိ့ ဒသေခံတှကေို သုဿနျနယျမွေ ပွနျသတျမှတျပေးတာတှေ မရှိသေးဘူး” ဟု ပွောဆိုသညျ။
ဒသေခံမြား အမှတျအသားစိုကျထူထားသော သုဿနျမွဖေကျြသိမျးခံခဲ့ရသညျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ယုဇနကုမ်ပဏီဘကျမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့တှဆေုံ့မေးမွနျးမှု ပွုလုပျခဲ့သျောလညျး သုဿနျမွသေတျမှတျပေးရနျ အတှကျ တိကသြော တုနျ့ပွနျမှု တဈစုံတဈရာ မရရှိခဲ့ကွောငျး အုပျခြုပျရေးမှူး Slg. Naw Di (ဆလနျ နျောဒီး)ထံမှ သိရပါသညျ။
ဆယျစုနှဈ တဈခုကွာ ဒသေခံမြားနှငျ့ ယုဇနကုမ်ပဏီသညျ မွယောနှငျ့ပတျသကျပွီး နှဈဖကျအငွငျးပှားမှုမြားနှငျ့ တရားစှဲဆိုမှုမြား ပုံမှနျဖွဈပကျြနပွေီး အစိုးရ၏ ဖွရှေငျးပေးမှုလညျး မရှိကွောငျး ဒသေခံမြား ပွောဆိုနကွေပါသညျ။
တဈဖကျတှငျလညျး ဒသေခံမြား၏ လိုအပျခကျြအရ ကြေးရှာပိုငျစားကကျြမွေ နှငျ့ သုဿနျ မွအေစရှိသညျတို့ကို အစိုးရခှငျ့ပွုခကျြမယူ၊ ယုဇနကုမ်ပဏီဖွငျ့ ညှိနှိုငျးမှုမပွုဘဲ ကိုယျပိုငျ သတျမှတျယူမှုမြား ပွုလုပျနကွေောငျး ဒသေခံမြားမှ သိရပါသညျ။
နောကျထပျ (၁)ပါတီ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPPနှငျ့ ပေါငျးစညျး
ကခငျြဆရာမ ၂ ဦး အဓမ်မပွုကငျြ့ အသတျခံရခွငျး အမှုမှနျပျေါပေါကျရေး ကွိုးပမျးနဆေဲ